Man'eewwan, tarjaawwan ykn tarreewwan hundumaa haqa. Man'eewwan garjalaa ykn garmirgaa man'eewwan haqamaniin bakkaduwwaa guutu. Hubadhu qaaqeen itti aanu yoo filatame filannoowwan haqaman ni kuufamu akkasumas deebi'anii fe'amu.
Naannoo kun filannoo wardiin tokko edda man'eewwan haqamaniin booda akkamitti akka mul'atan agarsiisa.
Man'eewwan ol jijjiiruu
Bakka duuwwaa uumame man'eewwan haqamaniin guuta.
Man'eewwan bitaa jijjiiruu
Bakka duuwwaa argaman man'eewwan gara mirgaa,man'eewwan haqamaniitti argamaniin guuta.
Tarree(wwan) hundaa haquu
Man'een takkallee edda filatamee booda,tarreewwan hundaa wardiirraa haqa.
Tarjaa(wwan) hundaa haquu
Man'een takkallee edda filatamee booda,tajaa hundaa wardiirraa haqa.
Title is: Man'eewwan haquu